System-level ချစ်ပ် ကုမ္ပဏီ Actions Semiconduction သည် ရှန်ဟိုင်း စတော့အိတ်ချိန်း တွင် စာရင်းဝင် သည် - Pandaily
တနင်္လာနေ့၊Actions Semiconductor သည် ရှန်ဟိုင်း စတော့အိတ်ချိန်း တွင်စတင် ကုန်သွယ် ခဲ့သည်။အစုရှယ်ယာ အသစ်များ ၏ပြ price နာ စျေး နှုန်းမှာ ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် ၄၂. ၉၈ ယွမ် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆. ၇၃) ဖြစ်ပြီး ပထမ နေ့တွင် ရှယ်ယာ ၈၅. ၀၁ ယွမ် ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် လူသိများသော ပြည်တွင်း စွမ်းအင် နိမ့် system-on-chip (SoC) ဒီဇိုင်နာ ဖြစ်ပြီး အသိဥာဏ် ရှိသော IoT ထုတ်ကုန် များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပေါင်းစပ်ထားသော ချစ်ပ် များကို အာရုံစိုက်သည်။
IPO အတွက် မိုဘိုင်း Semiconductor သည် စမတ် Bluetooth အသံ ချစ်ပ် များ အဆင့်မြှင့်တင် ခြင်း၊ ၀ တ်ဆင် နိုင်သော နှင့် အင်တာနက် အရာ ၀ တ္ထု များအတွက် Ultra-low-power MCU များ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် R & D စင်တာ များတည်ဆောက် ခြင်းတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ရန်အတွက် ယွမ် ၃ ၅၁ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၅ သန်း) ကိုမြှင့်တင် ရန်စီစဉ် ထားကြောင်း ကြေငြာချက် ကဖော်ပြသည်။
ကုမ္ပဏီ ၏အဓိက ထုတ်ကုန် မှာ Bluetooth အသံ ထုတ်ကုန်များ၊ သယ်ဆောင် ရ လွယ် သော အ သံနှင့် ဗွီဒီယို စက် ပစ္စည်းများနှင့် အသိဉာဏ်ရှိသော အသံ အပြန်အလှန် ထုတ်ကုန် များအတွက် SoC ချစ်ပ် စီးရီး ဖြစ်သည်။ ဤကိ ရိယာ များကို Bluetooth စပီကာ များ၊ နားကြပ် များ၊ အသံ အဝေးထိန်း များ၊ transceiver များနှင့် ပညာရေး၊ စမတ် ရုံးသုံး ပစ္စည်းများနှင့် စမတ် အသုံးအဆောင် များတွင် တွေ့နိုင်သည်။
ရောင်းအား အရ မိုဘိုင်း ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ ၏ ထိပ်တန်း ဖောက်သည် ငါး ဦး တွင် Huawei, Sony, Anke Hi-Tech, Logitech, OPPO, Xiaomi, Transsion, Philips နှင့် Lenovo စသည့် နာမည် အမျိုးမျိုး ဖြင့် ဖြေရှင်းချက် ပံ့ပိုး သူများနှင့် module အစိတ်အပိုင်း ထုတ်လုပ်သူ များပါဝင်သည်။ နောက်ထပ် လူသိများသော ဖောက် သည်တစ် ဦး မှာ စက်မှု လုပ်ငန်းတွင် အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို လူသိများသော ဖြန့်ဖြူး သူ RichPower Electronic Devices ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:SMIC နှင့် Beijing တို့သည် semiconductor မိမိကိုယ်ကို အားကိုး ရန်ကြိုးစား သည်
Actions Semiconductor က အိတ်ဆောင် အသံ နှင့် ဗွီဒီယို SoC ချစ်ပ် များ၏ တည်ငြိမ်သော ရောင်းအား ကို အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီသည် Bluetooth audio နှင့် smart voice interactive SoC ချစ်ပ် များကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များ စွာ ကိုစတင်မိတ်ဆက် ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန် များသည် စျေးကွက် တွင်အလွန် လူကြိုက် များပြီး ကုမ္ပဏီ အား ဆက်လက် ကြီးထွား စေသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် mobile semiconductor Bluetooth audio SoC ချစ်ပ် များကို ၆၄. ၈ ၂၂ သန်း ရောင်းချ ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် ထက် ၄၆. ၆၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။